ATRIKASA NIARAHANA TAMIN’IREO MPIANTSEHATRA SY MPISITRAKA NY TRANOBE IOMBONANA HANODINANA VATOSOA AO ANTSIRABE – Ministère des Mines et des Ressources Stratégiques
Taorian’ny fitsidihana ny Tranobe iombonana hanodinana vatosoa na Atelier Communautaire de Lapidairerie teny Vatofotsy Antsirabe dia nisy ny fihaonana sy dinidinika niarahan’ny Minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny Loharanonkarena Stratejika Fidiniavo RAVOKATRA sy ireo mpiara-miasa aminy tamin’ireo mpiantsehatra sy mpahazo tombontsoa amin’ity fotodrafitrasa ity.
Fotoana izay nampitàna ireo tsara ho fantatra momba ity tetikasa ity sy ny seha-pihariana vatosoa amin’ny ankapobeny, ary indrindra nanomezan’ireo mpiantsehatra tolo-kevitra momba ny fandrindrana sy fitantanana ary fampaharetana ny fotodrafitrasa iombonana sy ireo fitaovana ao anatiny.
Nankasitraka feno ny Fitondram-panjakana amin’izao foto-drafitrasa izao, izay tena mamaly ny filàny, ireo mpiantsehatra izay nilaza fa matetika misedra olana amin’ny tsy fananana fitaovana hary fomba hanarahana ny lenta takian’ny tsena iraisam-pirenena. Nahavelom-bolo ny fifanakalozan-kevitra sy ny fahavitrihan’ny mpandray anjara nandritra izao fihaonana izao.
Tetikasa santatra ity ao Antsirabe ity, araka ny fanazavan’ny Minisitra Fidiniavo RAVOKATRA ary kendrena hihodina avy hatrany ny ivon-toerana raha vantany vao tonga ireo fampitaovana hampiasaina ao anatiny. Mbola hisitraka fotodrafitrasa toy izao ny any amin’ny Faritra hafa satria maro ireo olona mivelona amin’ity seha-pihariana vatosoa sy vato sarobidy ity. Nohamafisiny hatrany koa ny amin’ny maha-zava-dehibe ny fampanarahan-dalàna ireo mpiantsehatra mba hahafahan’ny lalam-pihariana vatosoa hitondra fampandrosoana tena izy ho an’ny Faritra sy ny firenena.